Amatemu Womklami: Amafonti, Amafayela, Amagama Okubhalwa Kwamagama kanye Nezincazelo Zokuhlelwa | Martech Zone
NgoMsombuluko, Juni 1, 2020 NgoMsombuluko, Juni 1, 2020 Douglas Karr
Kunamagama amancane asetshenzisiwe lapho kuchazwa ukwakhiwa nalesi infographic kusuka Ikhasi.
Njenganoma yibuphi ubuhlobo obuhlakulelayo, kubalulekile ukuthi zombili izinhlangothi zikhulume ulimi olufanayo kwasekuqaleni. Ukuze sikusize uthuthuke olimini lwakho lokuklama, sihlale phansi nabaklami abangochwepheshe sathola amagama abawasebenzisa kaningi namakhasimende, nalezo ezijwayele ukukhubekisa umuntu ojwayelekile kancane.
I-infographic inikeza izincazelo nezincazelo zamagama wenqubo ejwayelekile.
Inqubo Yokuqamba Amagama:
Amafayili amafayela - isakhiwo esiyisisekelo esingakabi nezinto zokwakha.
Ufika - ngemuva kwamafreyimu wocingo, isinyathelo esilandelayo sokudala, imvamisa lapho ukwakheka kuya kudijithali.
prototype - isigaba esilandelayo sasihlose ukunikeza umbono oseduze womkhiqizo osebenzayo.
Amagama Wokwakheka Kwemidwebo
Bleed - ukuvumela ukwakheka ukuba kudlule emaphethelweni ekhasi ngakho-ke akunamugqa.
Igridi - isetshenziselwe ukuphrinta nokwakhiwa kwedijithali ukusiza ukuvumelanisa izinto ukudala ukungaguquguquki.
Isikhala esimhlophe - indawo eshiywe ingenalutho ukuletha ukugxila kwezinye izinto ekhasini.
I-Gradient - ukufiphala usuka komunye umbala uye komunye noma usuke opaque uye obala.
ukupheda - isikhala esiphakathi komngcele nento engaphakathi kwaso.
margin - isikhala esiphakathi komngcele nento engaphandle kwaso.
I-Typographic Design Terminology
Ehola - ukuthi imigqa yombhalo ihlukaniswe kanjani ngokuma, eyaziwa nangokuthi ukuphakama komugqa.
Ukuqonda - Ukulungisa izikhala zibheke phezulu phakathi kwezinhlamvu egameni.
Bhala ukubuyekeza - ubuciko bokuhlela izinto zohlobo ngezindlela ezikhangayo.
Ifonti - ukuqoqwa kwezinhlamvu, izimpawu zokubhala, izinombolo nezimpawu.
Amagama Esakhiwo Sewebhu
Ngezansi kwesibaya - indawo yekhasi umsebenzisi okufanele askrolele ukuyibona.
Isabele - umklamo wewebhu olungisa ukwakheka kwezikrini ezahlukahlukene zosayizi.
Resolution - inani lamachashazi nge-intshi ngayinye; I-72dpi yezikrini eziningi, i-300dpi yokuphrinta.
Imibala yewebhu - Imibala esetshenziswe kuwebhu, emelwe yizinombolo ezi-6 ze-hexadecimal code.
Amafonti aphephile kuwebhu - amafonti amadivayisi amaningi anawo, njenge-Arial, Georgia, noma i-Times.
Tags: ngezansi kwesibayaukuphumacmykcompsizincazeloumklamiamagama abaklamidpiifontiamafontigifi-gradientgridJpegukuzwakalisaeholawekhasiukuphedaumabhebhanaPDFpngppiprototypepsdisixazululoisabelergbisichazamazwingokwemibandelaukunyathelisauiuximibala yewebhuamafonti aphephile wewebhuisikhala esimhlopheumhlopheama-wireframes
I-Facebook Ichithe Ingxoxo Ehloniphayo Nevulekile… futhi ngiqedile